Difenoconazole waxaa badanaa loo isticmaalaa ku buufinta geedaha miraha, iyo ku buufinta ka hor ama heerka ugu horeeya ee cudurka ayaa leh ka hortagga iyo xakamaynta ugu fiican. ★ Cudurada liinta waxaa lagu buufiyaa qiyaastii 2 jeer mid kasta oo ka mid ah xilliga koritaanka guga, xilliga koritaanka biqilka xagaaga, dhalinyarada f ...
Difenoconazole waa wax-qabad sare, badbaado, sun-yar, fangaside ballaadhan oo ballaadhan, oo ay nuugi karaan dhirta isla markaana leh saameyn xoog leh oo osmotic ah. Sidoo kale waa shey kulul oo ka mid ah sunta sunta. Adoo burburinaya isku-darka darbiga unugga bakteeriyada, waxay faragelisaa ...
Labadii sano ee la soo dhaafay, inta badan beeraleyda khudaarta waxay beereen noocyo u adkeysan kara virus-ka si looga hortago inay dhacaan cudurada viruska yaanyada Si kastaba ha noqotee, noocyada noocan ah waxay leeyihiin hal shay, oo ah, inay iska caabin yar tahay cudurada kale. Isla mar ahaantaana, marka beeraleyda khudradda badanaa ...
Diethyl aminoethyl hexanoate (DA-6) waa jaangooye ballaaran oo kobciya dhirta oo leh shaqooyin badan oo auxin, gibberellin iyo cytokinin ah. Waxay ku milmi kartaa biyaha iyo dareeraha dabiici ahaanta sida ethanol, ketone, chloroform, iwm. Way ku xasilloon tahay keydinta heerkulka qolka, waxay ku xasilloon tahay dhexdhexaad iyo ...
Si loo yareeyo waxyeelada ay cayayaanku u geystaan ​​dalagyada, waxaan soo saarnay tiro badan oo cayayaanka kala duwan ah. Habka waxqabadka ee cayayaanka kala duwan waa isku mid, haddaba sidee baan u dooran karnaa kuwa runtii ku habboon dalaggeenna? Maanta waxaan ka hadli doonaa laba sunta cayayaanka ah ...